I-T-shirt, okanye ihempe, luhlobo lwehempe yelaphu ebizwa ngohlobo lwe-T lomzimba wayo kunye nemikhono yayo. Ngokwesiko, inemikhono emifutshane kunye nentsimbi ejikelezayo, eyaziwa njenge-crew neck, engenakho ikhola. Izikipa ngokubanzi zenziwe ngelaphu eloluliweyo, elilula nelingabizi mali kwaye kulula ukuzicoca. I-T-shirt yavela kwizambatho zangaphantsi ezazisetyenziswa ngenkulungwane ye-19 kwaye, phakathi kwinkulungwane yama-20, zatshintsha ukusuka kwisambatho sangaphantsi saya kwimpahla eqhelekileyo yokunxiba.
Ngokwesiqhelo yenziwe ngelaphu lomqhaphu kwistockinette okanye ijezi ebotshiweyo, inolusu olucekeceke ngokuthelekiswa nehempe ezenziwe ngelaphu elilukiweyo. Ezinye iinguqulelo zale mihla zinomzimba owenziwe ngetyhubhu eboyiweyo eqhubekayo, eveliswa kumatshini wokunitha osisetyhula, ukuze umzimba ungabinamacala ecaleni. Ukwenziwa kwezikipa sele kuzenzekelayo kwaye kunokubandakanya ukusika ilaphu nge-laser okanye i-jet yamanzi.
Izikipa zixabisa kakhulu ukuvelisa kwaye zihlala ziyinxalenye yefashoni ekhawulezayo, ekhokelela kwintengiso ephelelwe lixesha yezikipa xa kuthelekiswa nezinye iimpahla. Umzekelo, kuthengiswa ii-T-shirts ezibini ngonyaka e-United States, okanye umntu oqhelekileyo wase-Sweden uthenga i-T-shirts ezisithoba ngonyaka. Njengomqhaphu obulala izitshabalalisi kunye namanzi.
I-T-shirt ye-V-neck ine-neckline efana ne-V, ngokuchasene ne-neckline ejikelezayo ye-shirt ye-crew neck shirt (ebizwa ngokuba yi-U-neck). I-V-necks zaziswa ukuze i-neckline yehempe ingabonakali xa inxitywe phantsi kwehempe engaphandle, njengoko ibiya kuba yhempe yentamo yabasebenzi.
Ngokwesiqhelo, isikipa, esinobunzima be-200GSM, kunye nokwakhiwa kwayo yi-60% yomqhaphu kunye ne-40% ipholiyesta, olu hlobo lwelaphu luyathandwa kwaye lutofotofo, uninzi lwabathengi lukhetha olu hlobo .Okunye, abanye abathengi bakhetha ukukhetha olunye uhlobo yelaphu, kunye nohlobo olwahlukileyo lokuprinta kunye noyilo lokuhombisa.